Ny Lalàna: ny pelaka webcam dia pôrnika mivantana ho an'ny fandoavam-bola | Valin'ny Fanamarinana
Home Lalàna Webcam sex
Ny fanadihadiana iray momba ny BBC 3 antsoina hoe "Webcam Boys" nalefa tamin'ny Febroary 2016 dia nitatitra momba ny tontolon'ny bolongana marobe, global webcam. Nanaraka ny fiainan'ny modely 4 tanora maka sary ao UK izy ireo. Ny Webcaming dia ny olona manokana manao fiainana, miaina ny fanaovana firaisana amin'ny alalan'ny fakantsarin'ny ordinatera amin'ny famoahana mpanjifa. Tahaka izany Hafatra Vetaveta amin'ny smartphone saingy amin'ny ambaratonga lehibe kokoa. Ity no fotoana kely amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia. Heverina ho manodidina ny 100,000 mpikirakira webcam lahy any Angletera fotsiny.
Ny modely notontosaina tamin'ny horonantsary fanadihadiana dia nihevitra azy io ho toy ny fomba hampiasana vola mora foana, manao asa ara-pananahana irery na miaraka amin'ny namana izay hataon'izy ireo, saingy amin'izao fotoana izao, amin'ny karama mba hanomezana fahafaham-po ireo mpitsikilo sy fanta-daza isan-karazany.
Ny modely rehetra dia nanolotra azy ho toy ny orinasa. Araka ny ambaran'ny ankamaroan'ny mpanjifa, dia tsy ela dia nalain'ireo mpanjifany ho nanao firaisana ara-nofo ny vanilany ary nitady zavatra vaovao sy nandrisika kokoa. Midika izany fa ny hitazonana ireo mpanjifalotra dia faly ny 'modely' miezaka manangona olona vaovao ao amin'ny orinasa iray na manao asa goavana kokoa mba hitazonana ny mpanjifa mandoa.
Araka ny lahatsoratry ny gazetiboky vehivavy ao amin'ny 2014, dia misy 'zana-tovovavy' sasany ataon'ny lehilahy amin'ny webcams ho setrin'ny fanomezam-pahasoavana izay nangatahan'izy ireo tamin'ny lisitry ny fanirian'i Amazon. Toe-tsisika mahamay izany. Olona maro no mifantoka amin'ny vola ary manamarina ny fihetsika nataony na dia eo aza ny fanitsakitsahana ny soatoavina ara-môraly na ny an'ny fianakavian'izy ireo. Maro no tsy mihevitra azy io ho endrika fivarotan-tena.
Modely iray tao amin'ny fanadihadiana dia nahatratra ny fetrany tamin'ny fiezahana hampifaly ireo mpanjifany mangataka amin'ny mpanjifa ary nanapa-kevitra ny hivarotra ny harenany ho an'ny orinasam-piarovana.
Na ny olona mamatsy ny fitaovana na ny fangatahana azy, ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto dia singa manan-danja eo amin'ny fampiroboroboana ity indostrialy ity.
Ireo manam-pahaizana momba ny heloka bevava efa nomanina dia nanara-maso ireo mpampiasa mandoa vola amin'ny fianakaviana mahantra ao amin'ny tany mahantra izay manery ny ankizy hametaka ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny alàlan'ny webcam noho ny fahafinaretana ara-pananan'ny mpanjifa any ivelany.
Ny ohatra iray faramparany, dia ny fametavetana Trevor Monk izay nandrakitra ny tenany tamin'ny fanararaotana ireo tovovavy tao Filipina ary nogadraina nandritra ny 19-sy-taona sy tapany. Nandoa £ 15,000 ihany koa i Trevor Monk mba hijery ny fanararaotana hanao firaisana ara-nofo ao Manille amin'ny tranonkalany.
Ny polisy dia nahita sary mihoatra ny 80,000 sy lahatsary 1,750 tsy mendrika amin'ny ankizy tao anaty trano iray tao an-tranony tamin'ny volana 2015. Niaiky izy fa nanana ny sarin'ny ankizy sy ny fanaovana sary tsy mahazatra, ny famelezan'ny zaza iray eo ambany 13 ary mitaona zaza hanao firaisana.
Ny iray tamin'ireo zazavavy nenjehiny dia valo taona ary sarin-jaza iray telo taona no hita teo amin'ireo sary. Ny mpitsara Anuja Dhir dia namariparitra ireo sary ireo ho toy ny “sary mampihoron-koditra amin'ny ankizy mbola kely dia iharan'ny fanararaotana sy fanalam-baraka amin'ny fomba ratsy indrindra”.
<< Ny indostrian'ny pôrnôgrafia